Sakafo sakafo maivana: Afaka mihena ve ianao amin'ny fihinanana sakafo maivana? | Sakafo Nutri
Ny sakafo fihinanan-tsakafo dia manome antoka fa mifanentana ny fihinanana sakafo maivana sy ny fihenan-danja. Ity drafi-pisakafoanana mahaliana ity dia miresaka fatiantoka 3-4 kilao isam-bolana, ary vao mainka aza mihinana tsakitsaky isan'andro.
Ankoatry ny maha-iray amin'ireo sakafo ankafizin'ny ankamaroan'ny olona dia haingana sy mora entina ny tsakitsaky. Izany no antony no lazaina ho hevitra tsara ho an'ireo izay manam-potoana kely hihinanana na tsy maintsy misakafo lavitra ny trano.
2 Manolotra karazana sandwich va ianao?
3 Sakafo afaka ary tsy azo hanina
Ny fahasamihafana lehibe atolotry ny sakafo sandwich momba ny fihinanana lanja hafa dia ny famporisihana ny fihinanana mofo. Ary izany ve ity drafitra ity dia mihevitra ny mofo ho mpiray dina ary amin'ny ankapobeny ny gliosida rehetra. Etsy ankilany, ny tavy (indrindra ny tavy tototry) dia voafantina ho fahavalo lehibe ho an'ny tsipika. Ary lazainy fa mbola ratsy kokoa aza izany raha atambatra amin'ilay taloha. Raha fintinina dia afaka mihinana gliosida ianao, saingy mila manafoana ny tavy.
Ity drafitry ny sakafo ity dia manolotra atolory ny vatana amin'ny endrika mofo ny ampahany tsara amin'ny gliosida ilainy isan'andro hanao asa maro araka ny tokony ho izy. Ny iray amin'izy ireo dia ny famatsiana herinaratra. Fa nohamafisiny ihany koa fa mba tsy hampatavy ny sandwich dia tsy maintsy miaraka amin'ny legioma, legioma ary proteinina kely tsy misy tavy ny mofo. Sandwiches eny, fa mahasalama.
Ny tahan'ny fahombiazana nomena azy dia tena avo tokoa, zavatra iray izay ananan'ilay singa psikolojika, tsy isalasalana, fa be atao. Ary io dia amin'ny fomba fijery ara-tsaina, izay zava-dehibe tokoa hamenoana ny sakafo sy hahatratrarana ny tanjon'ny lanjany, ny sakafo sandwich dia mety ho henjana kokoa noho ny ambiny. Satria mamela anao hihinana tsakitsaky dia tsy misy fahatsapana ny mihinana sakafo toy ny an'ny hafa. Izany rehetra izany dia mety hahatonga azy io ho zaka kokoa ho an'ny olona sasany.
Manolotra karazana sandwich va ianao?
Ny tsakitsaky an'ity sakafo ity dia tsy azo atao amin'ny fomba rehetra, fa tsy maintsy mahafeno fepetra maromaro. Ny tena lehibe dia ny tsy fananan'izy ireo tavy, satria izany no fomba hanampian'ity drafitra fihinanana ity anao hampihena. Noho izany, ny hamburger mahazatra an'ny trano fisakafoanana haingana dia ariana, ary koa ny sandwich chorizo ​​na ny saosisy matavy be hafa.
Ny hameroana serrano tsy misy tavy, tratra akoho atono ary salmona dia anisan'ireo akora azo ampiasaina amin'ny sandwich. Na dia heverina ho hena voadio aza, ny sakafo toy ny turkey na ny masaka nandrahoina dia atolotra ihany koa ao anatin'ity sakafo ity Etsy ankilany, tsara ny manampy greens sy legioma amin'ireo hena ireo, toy ny arugula na voatabia. Ny tanjona dia ny fampitomboana ny anjara sakafo mahavelona an'ny sandwich.
Misy ny firesahana ny ampahatelon'ny mofo (na mofo lava 15 sentimetatra) isan'andro. Fa ny habetsaky ny mofo azon'ny olona tsirairay ihinanana dia mety miova arakaraka ny anton-javatra maromaro, ao anatin'izany ny BMI (body index index). Ity sakafo ity dia miantoka fa tsara kokoa raha mofo varimbazaha manontolo na misy masomboly, satria manampy amin'ny fampitomboana ny fahatsapana fahafaham-po, ary koa amin'ny fanatsarana ny fivezivezin'ny tsinay. Ny tampon-tampona sy ny biskitra dia tsy tokony hasaina, ary koa ny mofo fotsy sy mofo voadidy, raha tsy hoe tsy mitambatra ity farany.. Ny antony dia satria karazany tsy dia manome otrikaina amin'ny vatana izy ireo.
Ny habetsaky ny mofo atokana isan'andro dia mazàna nohanina amin'ny endrika sakafon-tsakafo mandritra ny sakafo atoandro na sakafo hariva, saingy tsy voatery hampiasa azy io hanomanana sandwich. Azo hanina amin'ny fomba nentim-paharazana ihany koa izy io, ho lovia. Raha mihinana sandwich ho an'ny sakafo hariva ianao, amin'ny mitataovovonana dia tokony ho nihinana proteinina sy legioma teo ambony lovia ianao, ary niezaka nanao azy io ho tsy misy tavy araka izay tratra. Ary ny mifamadika amin'izany.
Sakafo afaka ary tsy azo hanina
Ny sakafo sandwich dia manolotra ny fihinanana sakafo isan-karazany tsy misy tavy na kely. Avela hihinana:
Kafe, dite raokandro ary zava-pisotro maivana
Avela ny ronono, fa tsy maintsy atao an-tsokosoko. Ohatra, ho an'ny sakafo maraina dia afaka manana kafe misy ronono an-tsokosoko ianao, toast roa ary voankazo iray. Ary ny yaourt skimmed dia matetika mandritra ny sakafo antoandro sy tsakitsaky, miaraka amin'ny voankazo no solony. Avela ihany koa ny sakay, pickles, capers ary holatra. Toy izany koa, isaky ny misakafo dia tokony hahatratra rano efatra vera.
kosa, menaka, sakafo nendasina, mofomamy indostrialy, tsakitsaky fonosina ary amin'ny ankapobeny tsy azo atao izay rehetra misy tavy. Ny tsy famelana sakafo matavy mahasalama na famerana ny fihinanana azy dia manome olana ho an'ny manam-pahaizana maro ny fihinanana sakafo. Ary mahasoa ny vatana ve ireo (manampy amin'ny fampihenana ny mety hisian'ny aretim-po) ary, noho izany, dia tokony ho ampahany lehibe amin'ny sakafo ara-pahasalamana sy voalanjalanja.
Tadidio fa alohan'ny hanaovana fanovana lehibe amin'ny sakafonao, toy ny tranga misy dia ilaina ny manatona ny dokoteranao aloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo sandwich
Mampatavy anao ve ny labiera?
Sakafo very 10 kilao